Ny Variana Lambda: Manohitra ny vaksiny ary mifindra kokoa?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny Variana Lambda: Manohitra ny vaksiny ary mifindra kokoa?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Chili • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Safety • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Lambda Variant an'ny COVID-19 dia mety ho fiakarana avy any amin'ny Delta Variant ankehitriny, ahiahiana ho nahatonga fiovana amin'ny fifindra-monina na niteraka aretina mahery vaika kokoa.
Na izany aza mbola eo am-panadihadiana izy io. Ny fandinihana ataon'ny laboratoara dia mampiseho fa misy mutation izay manohitra ny antibodies entin'ny vaksininy.
Ny variana Lambda dia nahasarika ny saina ho loza mitatao vaovao amin'ny fampandrosoana ny areti-mifindra COVID-19
Ny karazana Lambda an'ny coronavirus, izay fantatra voalohany tany Però tamin'ny volana desambra, dia mety hihena, nefa manana ihany koa ny fahafaha-miteraka aretina mafy kokoa raha tsy ajanona. Ny tranga dia hita tany Texas sy South Carolina, ary amin'ny 81% amin'ireo tranga hita tany Peroa.
Ny variana Lambda manana mutation izay mahatohitra vaksiny.
Fiovana roa ao amin'ny Lambda variant — T76I sy L452Q — no mahatonga azy io hiparitaka be kokoa noho ny fiovaovan'ny COVID nanerana an'izao tontolo izao tamin'ny taona 2020
Ny fehin-kevitra natao tamin'ilay fanadihadiana dia nifanaraka tamin'ny valin'ny ekipa iray tany Chili izay nahita ny fiovana mety hialana amin'ny vaksinina vaksinina, hoy ny tatitry ny Infection Control an'i Chile.
Ity tatitra ity dia mbola tsy nodinihin'ireo mitovy taona aminy.
Ny variana COVID-19 izay manaporofo fa tsy mahazaka vaksiny dia mitazona ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana, ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka ary ireo mpitsabo arofanina amin'ny lohalaharana amin'ny valan'aretina COVID-19 amin'ny alina.
Inona ny variant Lambda raha ny fanadihadiana avy any Chile?
Background Ny tsipika vaoavao SARS-CoV-2 C.37 dia nosokajiana ho variana liana amin'ny alàlan'ny WHO (Lambda variant) mifototra amin'ny taha avo lenta any amin'ny firenena amerikanina tatsimo sy ny fisian'ny mutation kritika amin'ny proteinina spike. Ny fiantraikan'ny mutation toy izany amin'ny infectivity sy ny fialana amin'ny immune amin'ny antibody neutre dia tsy fantatra tanteraka.
fomba Nanao fanandramana ny fanamorana ny viriosy pseudotyped izahay ary namaritra ny fiantraikan'ny fahasamihafana Lambda amin'ny areti-mifindra sy ny fandosirana ny hery fiarovana amin'ny alàlan'ny santionan'ny plasma avy amin'ny mpiasan'ny fahasalamana (HCW) avy amin'ny ivon-toerana roa ao Santiago, Chile izay nahazo ny drafitra fatra roa an'ny vaksinin'ny virus CoronaVac tsy nihetsika.
Hitanay ny fitomboan'ny areti-mifindra ampiasain'ny proteinina speda Lambda izay avo kokoa noho ny an'ny D614G (tsipika B) na ny Alpha sy Gamma. Raha ampitahaina amin'ny karazana Wild (tsipika A), ny fampihenana dia nihena 3.05-heny ho an'ny variana Lambda raha 2.33-heny kosa ho an'ny variana Gamma sy 2.03-heny ho an'ny variant Alpha.
fehin-kevitra Ny valiny dia manondro fa ny fiovan'ny fiovan'ny zana-ketsa Lambda dia manome fitomboan'ny areti-mifindra sy ny fandosirana ny hery fiarovan'ny hery manohitra. Ireo angon-drakitra ireo dia manamafy ny hevitra fa ny fampielezan-kevitra amin'ny fanaovana vaksiny goavambe any amin'ny firenena manana fivezivezena mafy SARS-CoV-2 dia tsy maintsy ampiarahina amin'ny fanaraha-maso henjana genomika mamela ny famantarana ireo mitoka-monina vaovao mitondra mutation spike sy fanadihadiana momba ny immunology mikendry hamaritana ny fiantraikan'ireo fiovana ireo amin'ny fandosirana fiarovana sy fandrosoana vaksinina.
Ny fisehoan'ny fiovan'ny fihenan'ny SARS-CoV-2 sy ny fiovaovan'ny fahalianana dia marika nampiavaka ny valanaretina COVID-19 nandritra ny 2021.
Ny tsipika vao naseho SARS-CoV-2 C.37 dia nosokajiana ho karazan-karaman'ny WHO tamin'ny 14 jonath ary nomena anarana hoe variant Lambda. Ny fisian'ity variant vaovao ity dia notaterina tany amin'ny firenena 20 mahery hatramin'ny volana Jona 2021 miaraka amin'ny ankamaroan'ny filaharana misy avy any amin'ny firenena amerikana atsimo, indrindra ny avy any Chile, Peroa, Ekoatera ary Arzantina.5. Ity variana mahaliana vaovao ity dia miavaka amin'ny fisian'ny famafana tampoka ao amin'ny gen ORF1a (Δ3675-3677) izay efa nofaritana tao amin'ny Beta sy Gamma, izay misy ahiahy sy fiovana Δ246-252, G75V, T76I, L452Q, F490S, T859N ao amin'ny proteinina spike6. Ny vokatry ny fiovan'ny tsimok'aretina amin'ny areti-mifindra sy ny fandosirana ireo antibodiôma tsy mitongilana dia tsy fantatra tanteraka.
Mandalo fandaharana fanaovana vaksiny goavana i Shily amin'izao fotoana izao. Raha ny angom-baovao avy amin'ny minisiteran'ny fahasalamana shiliana hatramin'ny 27 jonath 2021, 65.6% n'ny olona kendrena (18 taona no ho miakatra) no nahazo ny drafitra fanaovana vaksiny feno7. Ny ankamaroan'ny olona (78.2%) amin'ireo olona vita vaksiny tanteraka dia nahazo ny paika roa amin'ny vaksinin'ny virus CoronaVac izay tsy nihetsika, izay voalaza fa nahazo antikônôma tsy mitongilana fa amin'ny titer ambany kosa raha ampitahaina amin'ny plasma na sera avy amin'ireo olona vonjimaika.
Eto izahay dia nampiasa ny fanandramana momba ny fanamorana ny viriosy pseudotyped teo aloha12 hamaritana ny fiantraikan'ny fahasamihafan'ny Lambda amin'ny valin-kafatra manohitra ny antibody ateraky ny vaksinin'ny virus CoronaVac tsy nihetsika. Ny angon-drakitra dia mampiseho fa ny fiovana misy ao amin'ny proteinina spike an'ny karazana Lambda dia manome fitomboan'ny areti-mifindra sy ny fandosirana ireo antibiotika tsy miandany navoakan'ny vaksinin'ny virus CoronaVac izay tsy nihetsika.
Nasaina handray anjara ireo mpiasan'ny fahasalamana avy amin'ny toerana roa ao Santiago, Chile. Ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia nahazo ny tetika roa-doka an'ny CoronaVac, isaky ny fatra omena 28 andro ny elanelana araka ny fandaharan'asan'ny vaksinina Shiliana. Ny santionan'ny plasma dia nangonina teo anelanelan'ny Mey sy Jona 2021. Ny mpandray anjara rehetra dia nanao sonia fanekena mialoha alohan'ny nanaovana ny fomba fandalinana.